စပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အတူမယားစကား - တစ်ဦးဂန္စာရွက်
သငျသညျအိမ်လုပ်ကိတ်မုန့်များအတွက်ရိုးရှင်းသောစာရွက်ရှေးခယျြ? ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်အဆိုပြု, စပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အတူရွေးချယ်စရာကိတ်မုန့်ဖို့သတိထားရမှာအကြံပြုပါသည်။ နိမ့်ဆုံးအချိန်သုံးစွဲခြင်းနှင့်စရိုက်ထုတ်ကုန်များ၏အစုများနှင့်ရလဒ် - လက်ဖက်ရည်တစ်အရသာနှင့်အရသာအားရစရာ, လူကြီးများနှင့်ကလေးများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအရူးဖြစ်လတံ့သောအနေဖြင့်။
စပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အတူအိမ်လုပ်ဂန္မြို့တော်ကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို - gost နှင့်အညီတစ်ဦးစာရွက်
ဂျုံမုန့်ညက် - 255 ဂရမ်;
ကြက်သားကြက်ဥရွေးချယ်မှု -3PCs; ။
တောင်သူလယ်သမားထောပတ် - 175 ဂရမ်;
သကြား - 175 ဂရမ်;
vanilla သကြား - 20 ဂရမ်,
အမှုန့်ဖုတ် - pinch ၏စုံတွဲတစ်တွဲ;
စပျစ်သီးပျဉ် မှောင်မိုက် - 175 ဂရမ်;
ရော့ခ်ဆား - အနည်းငယ်အဖြစ်တော့;
icing သကြား အလှဆင်ဘို့။
လုံးဝလွယ်ကူသောတစ်ဦးဂန္မြို့တော်မယားစကား gost ပြင်ဆင်ပါ။ သငျသညျခကျြခငျြး 170 ဒီဂရီအပူချိန်မှာ setting, မီးဖိုအပူတက်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ အခုစပျစ်သီးပျဉ်ကိုလျှော်ပူရေမိနစ်အနည်းငယ်နှင့်အတူကဖြည့်ပါ။ သကြား, vanilla နဲ့သကြားနဲ့ဆားထည့်ခြင်းနှင့်အတူ triturated soft ထောပတ်တောင်သူလယ်သမား။ အခုတော့တဦးတည်းချိုမြိန်ကြက်သားကြက်ဥအားဖြင့်ရေနံအရောအနှောမှမောင်းထုတ်ခြင်းနှင့်စနစ်တကျကိုယ်အလေးချိန်တက်လှုပ်ဖို့, မုန့်စိမ်းရောနှော၏ပြင်ဆင်မှုမှချိတ်ဆက်ပါ။ ထို့နောက်မုန့်စိမ်းထဲမှာအတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့အသေးဝေမျှအတွက်မုန့်ဖုတ်အမှုန့်နှင့်မုန့်ညက်နှင့်အတူ sieved နှင့်ရောစပ်။ ဒါ့အပြင်ဂရုတစိုက်ကိတ်မုန့်များအတွက်အခြေခံအဖြစ်ကအတူရောက်စွက်ဖက်ပေါင်းစပျစ်သီးပျဉ်နှင့် obsushenny add ပြီးတော့မုန့်ဖုတ်တစ်ခုတော၌ထားသောကွန်တိန်နာထဲမှာပြန့်နှံ့တစ်ခုပြီးသား-အပူမီးဖိုပြားစေခြင်းနှင့်ပေးပို့ပါ။
မယားစကား propechetsya ချက်ပြုတ်၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှစ်ဆယ်မိနစ်။ သူသည်အမှုန့်သကြား pritrusit ရာပြီးနောက်, အအေးခွင့်ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝေမျှအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်သို့နှင့်လက်ဖက်ရည်နှင့်အတူဝတ်ပြုကြလော့။
kefir အပေါ်စပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အတူအရသာအိမ်လုပ် muffins
ဂျုံမုန့်ညက် - 340 ဂရမ်;
ကြက်သားကြက်ဥရွေးချယ်မှု -2PCs; ။
တောင်သူလယ်သမားထောပတ် - 105 ဂရမ်;
kefir - 255 ml ကို;
ဖုတ်အမှုန့် - 10 ဂရမ်,
မှောင်မိုက်စပျစ်သီးပျဉ် - 145 ဂရမ်;
အလှဆင်ဘို့ icing သကြား။
ဤကိစ္စတွင်အတွက်စမ်းသပ်မှု၏အခြေခံသည်ကိတ်မုန့်ဒိန်ချဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သကြားနှင့်အတူကြာပွတ်ကြက်ဥနှင့်အတူကရောထွေး, vanilla သကြားနဲ့ဆားကိုထည့်သွင်းအလွန်ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်မိတ်ဆက်နှင့်တစ်ဖန်အားလုံး horoshenechko whisk ။ အခုတော့နည်းနည်းအမှုန့်သန့်စင်ပေးရမည်မုန့်ညက်ဖုတ်နှင့်အတူမုန့်စိမ်းအတွက်ကြားဝင်နှင့်မုန့်ညက်ရှိသမျှတို့ကိုဖု၏ဖျက်သိမ်းအောင်မြင်ရန်။ Pre-ကိုလျှော်ဖြည့်စွက်၏ကြိုတင်အဆင့်ရဲ့အဆုံးမှာအနည်းငယ်ပျစ်သီးပျဉ်ပေါင်းနှင့်အညီအမျှဒါဟာသီးအခြောက်လှန်းဖြန့်ဝေဖို့မုန့်စိမ်းမွှေပေးပါ။
ကိုယ်ကသာနေတဲ့အမဲဆီကိတ်မုန့်အိုးပုံသဏ္ဍာန်အတွက်မုန့်စိမ်းကိုတင်နှင့်မီးဖို၌မုန့်ဖုတ်ထုတ်ကုန်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီအဆုံးပါက 175 ဒီဂရီ preheated နှင့်တစ်နာရီများအတွက် timer နေရာမှာသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံစံနှင့်၎င်း၏အချင်း၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်အချိန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သွေ့ခြောက်သောသစ်သားသွားကြားထိုးတံအပေါ်စေတနာစစ်ဆေးမှုများ။
အမှုန့်သကြားနို့တိုက်ကျွေးမှုမပြုမီအအေးကိတ်မုန့် pritrushivaem ။
"Spartacus" ကိတ်မုန့် - ဟာဂန္စာရွက်
အရသာနဲ့လှပတဲ့အချိုပွဲအဖုံး - ချောကလက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကိတ်မုန့်အဘို့ချောကလက် icing
မုန့် custard pastries
မီးဖို၌ Lenten ပေါင်မုန့်
အိမ်မှာရေခဲမုန် - စာရွက်
တစ်ဦး waffle သံအတွက်မုန့်စိမ်းပြွန်
Kefir အပေါ် Donuts
Kefir အပေါ်ပန်းသီးနှင့်အတူ Apple ကပိုင်
အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အဆုံးအရသာမုန္လာဥနီကိတ်မုန့် - စာရွက်
အတ္ထုပ္ပတ္တိ Irina Volodchenko
Calvin Klein ဖိနပ်
ဖက်ရှင်မိတ်ကပ် - Fall-ဆောင်းရာသီ 2015-2016
အိမ်မှာ mackerel pickle ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မည်သို့လျင်မြန်စွာနှုတ်၌ stomatitis ကုသ?
အေးဂျင့် Provocateur - ရေမွှေး, အတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်ရေကူးဝတ်စုံအမှတ်တံဆိပ်လူသိများ
ယုန် Krishna ဟိန္ဒူဂါထာ
နိုင်ကြောင်း hypnosis - ကဘာအခြေခံပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ, နည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်
မျက်မှန် Miu Miu